Waa maxay DPI? Waa maxay macnaha PPI? Waa maxay xallin? | Abuurista khadka tooska ah
Waqtiga laga gudbayo, inta jeer ee ay dadka (guud ahaan dhalinyarada) waqti ku qaataan kombiyuutarka hortiisa ayaa sii kordheysa, iyadoo soo saareysa fal celinno badan, maadaama aan u kuurgali karno sida dadku waxay noqon karaan khubaro kumbuyuutar ah saacadaha badan awgood oo ay maraan iyagoo wax dhaqdhaqaaq ah ka wada.
Inta lagu jiro waqtigan oo dhan, waxaa suurtagal ah in la muujiyo sida dadku u helaan aqoon ku habboon oo ku saabsan qaybo badan oo aqoon ah oo ku dhex jira sayniska kombiyuutarka iyo qaabeynta, iyadoo u oggolaaneysa inay la kulanto dhibaatooyinka iyo baahiyaha ka soo kordha deegaankeeda ee la xiriira meelahaas.
1 Waa maxay DPI iyo PPI?
Waa maxay DPI iyo PPI?
Dareenkan, maqaalkani wuxuu ku siin doonaa macluumaad ku saabsan magacyada qaarkood (DPI, PPI), iyo sidoo kale ereyga xallinta, walxaha lagama maarmaanka u ah in laga ogaado adduunka naqshadeynta garaafka, si akhristaha ugu xisaabtami karo macnaha ereyadan iyo muhiimadda ay leedahay in la ogaado farqiga u dhexeeya magacyada DPI iyo PPI, taas oo lagu wareero marar badan.
Dareenkan, waxaan sii wadaynaa inaan soo bandhigno tixgelinta halkan lagu soo bandhigay.
Markii aan daabacaad samaynayno, sawirkeenna ayaa laga heli karaa gudaha qaraarro badan Iyo sidaan sifiican u ognahay, qaraarku wuxuu si weyn u saameeyaa tayada wax soo saarkeena garaafka ah. Dareenkan, DPI waxay u dhigantaa heerarka xallinta in madbacaduhu soo bandhigi karaan waqtiga la daabacayo.
Sidan oo kale, waxaan saadaalin karnaa in sababo dhaqaale awgood, ay jiri doonaan Noocyada u dhexeeya heerarka DPI ee daabacad kasta. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa inay jiraan heerar wakiil oo IPR ah waxayna umuuqataa taas 300 DPI waxay ku filnaan karaan inay soo saaraan sawir tayo wanaagsan leh.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira madbacado maanta yeelan kara heerarka DPI illaa 3000.
In kasta oo heerarka sare ee DPI ayaa noo dammaanad qaadi kara sawirro tayo wanaagsan leh, waxaa lagama maarmaan ah in si xeeladeysan loo hoggaansamo heerarka aaladaha ay ku soo saari karaan heer ahaan, habkan, waxay ka dhigan tahay in adeegsadayaashu ay ka taxaddaraan dhammaan wax ka beddelka ay ku sameynayaan DPI ee daabacayaashooda markay raadinta ku jiraan. sawirro tayo sare leh.
Tallaabooyinkani waxay sidoo kale khuseeyaan iskaanka, sababtaas awgeed, waxaa lagula talinayaa in marka shaqooyinka iskaanka la qabanayo ay la shaqeeyaan Heerarka DPI ee aan ka yarayn 300, si ay sawiradu u soo bandhigaan heerar tayo leh oo khuseeya.
Sida ay u jiraan go'aanno loogu talagalay sawirrada daabacaadda iyo iskaanka labadaba, sidoo kale waxaa jira go'aanno kormeerahayaga.
Haddii aan tixraacno xallinta kormeeraheena, waa in lagu xisaabtamo taas, guud ahaan, kormeerayaashu waxay soo bandhigi doonaan go'aanadooda iyo sidan, IPRs waxay ubaahan doonaan inay lawareegaan PPI / PPP waana magacyadan magacyadoodu inay noqon doonaan heerarka xallinta ee aan ka heli doonno kormeeraheenna, kaas oo sawirrada (wax kastoo ay yihiin DPI), lagu waafajin doono waqtiga lagu soo bandhigayo sawirka kormeeraha.
Waxaa sidoo kale jira xoogaa shaki ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya PPI iyo PPP runtiina, farqiga kaliya ee udhaxeeya labadan eray ayaa ah mid aan waxba ka jirin, maadaama tan hore ay tahay soo gaabinta Ingiriisiga iyo tan labaad, oo loo soo gaabiyay Isbaanish.
Dambe ma aha wax ka badan ama ka yar tirada mega pixels uu sawir ka kooban yahay. Sidan oo kale, sawir leh xallinta 1024 × 768 mega pixels, waxaa suurtagal noqon doonta in lagu xisaabiyo tiro cayiman oo pixels halkii sawir ah.
Guud ahaan, shaxanka kor ku xusan wuxuu ahaa midka ugu caansan sawirrada badan ee lagu soo bandhigo meerayaasha kala duwan.
Sidan oo kale, waxaan ku ogaan karnaa taas seddexdan eray waxay ula jeedaan canaasiir kala duwan. Aad ayey faa'iido u yeelan kartaa in la maareeyo macluumaadkan goorta naqshad sawireed waa, iyo sidoo kale marka daabacaadda iyo iskaanku ay ku lug leeyihiin, si aan u ogaanno sida tayada sare leh ay u yeelan karaan mashaariicdeena wakiillada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waa maxay DPI? Waa maxay macnaha PPI? Waa maxay xallin?
Vera Christian dijo
Haha Mahadsanid Professor !!
Ku jawaab Christian Vera
Miyaan ahay kan kaliya ee ogaaday in maqaal ka hadlaya kuwa cusub ee ku saabsan IPR xitaa aysan jabin soo gaabinta? Taasi xun
Ku abuur dhibco Adobe Premiere mashaariicda maqalkaaga